Nihazakazaka avy any amin’ny arabe ilay tovolahy ary tonga dia nitsoraka tao an-tokantranon’olona izay varavarana sendra nivoha. Afak’omaly atoandro no nisehoan’ny tranga. Nafeniny tamin’ireo olona izay nidirany fa natahotra fitsaram-bahoaka izy ka nolazainy fa marary. Vao mainka taitra ireo tao an-trano sy ny manodidina naheno azy io. Androbe na ramanenjana no noheverina nahazo azy ka raiki-tahotra sao tratran’ny areti-mifindra.
Afaka minitra vitsy, nisy feo nikiakiaka avy any lavitra niantso fa “Avoahy ilay mpangalatra teo”. Araka ny voazalan’ireo nanatri-maso, tsy navoakan’ ireo olona tao amin’ny trano nisitrihany avy hatrany ilay nitsoaka ary nampaniraka ilay mpanenjika hihazo ny fokontany fa tsy ankasitrahan’ireo mpiray tanàna ny fitsaram-bahoaka. Marihina fa ilay mpanenjika dia naratra ny tarehiny ary nilaza izy fa nodarohan’ilay nitsoaka ary lasan’ity farany ny volany.
Taorian’ny resaka ela nifanaovan’ny tompon-trano sy ilay mpanenjika dia navoaka ilay tovolahy mody manana aretina izay nampangain’ilay naratra fa mpangalatra ka nifanazava teo. Tsy nanaiky hanaraka ilay mpanenjika velively ilay nenjehina noho ny tahotra ny valifaty sy ny fitsaram-bahoaka ka nilaza fa tsy hiala eo izy raha tsy tonga ny manampahefana, indrindra ny mpitandro filaminana. Marihina moa fa samy mamo izy ireo ka tanteraka eto ilay fomba fiteny, ny mamo indray no miantso polisy.